ओलीलाई ‘दम्भको श्रीपेच’ चाहिएको छ : विश्वप्रकाश
न्युज कारोबार काठमाडौं साउन २, २०७५
नेपाली कांग्रेसले हालैमात्र सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीको माग सम्बोधनमा चासो नदिएको, आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको, निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेसले सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । तीमध्ये पनि चिकित्सक केसीको मागलाई कांग्रेसले प्रमुखताका साथ अघि सारेको छ । कतिपयले यसलाई कांग्रेसले कमजोर हाँगामा समातेर राजनीति गर्न खोजेको टिप्पणी पनि गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा कांग्रेसको आन्दोलन, त्यसबाट अपेक्षा गरिएका उपलब्धि र आगामी रणनीतिलगायतका विषयमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग गोपाल घिमिरेले गरेको कुराकानी : सरकार निकै बलियो छ, त्यसको तुलनामा विपक्षी अर्थात् तपाईंहरु निकै कमजोर हुनुहुन्छ, तपाईंहरुको नजरमा कसरी चलिरहेको संसद र सरकार ? सरकार चलाउन सामान्य बहुमत दिएर पठाएका हुन्, उहाँहरुलाई । समृद्धिको यात्रामा जानलाई सामान्य बहुमत अपुग हो भन्ने कुरो त हुन्न, राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन सामान्य बहुमतले नि हुन्थ्यो । उहाँहरुलाई दुई तिहाइ चाहियो । दुई तिहाइ पनि भएकै थियो । दम्भको श्रीपेच चाहियो । त्यसैले यो सरकारलाई हेर्दै गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनताको निर्णयबाट बनेको सरकार हो तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सरकार बन्नु र लोकतान्त्रिक चरित्र हुनुको बीचमा फरक हुन्छ । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको तर लोकतान्त्रिक चरित्रसँग कुनै साइनो नभएको सरकारका रुपमा चलेको छ । अब संसदमा हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छौँ । केही कमजोर भए पनि देश र जनतासँग जोडिएका मुद्दामा कसैले झ्याली गर्न खोज्छ भने हामी पछि हट्दैनौँ । उसो भए सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र देख्नुहुन्न ? अहिलेको सरकार बडा गहिरो अन्तर्विरोधमा छ । त्यो भनेको के हो भने, जुँगाको रेखी नबस्दै मुट्ठी बटारेर माओ र माक्र्सका मुनि बसेर सर्वहाराको अधिनायक स्थापना गर्छौं भने । तर, संसदीय व्यवस्थाभित्र रहेर रहने गरी सपथ खानुपर्यो । कम्युनिष्टहरु संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने सपना देखेर राजनीतिमा आएका हुन् । तर, जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दै गर्दा त्यही संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्यो । त्यसकारण एक खालकोे अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, उहाँहरु । त्यो हामीले पनि बुझेका छौँ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग दुईवटा बाटो बाँकी छन् । पहिलो, उहाँले विगतमा बाँडेका सपनाअनुसार अहिलेको प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा अवरुद्ध गर्दै सत्ता कब्जा गरेर जान्छु भन्ने दुस्साहसको बाटो । दोस्रो, हिजो हामीले के शास्त्र बोक्यौँ, कम्युनिष्ट मेनुफेष्टोमा के लेखिएको थियो भन्ने कुराको जड सुत्रीय बाटोमा जाँदैनौँ । हामी पनि सहभागी भएर जुन संविधान निर्माण गरेका छौँ । त्यो संविधानको मूल्यमान्यता बमोजिम हामी लोकतान्त्रिक रुपमा यसको स्वामित्व लिएर जान्छौँ भन्ने । अहिले उहाँहरुले सबै कब्जा गरेर जान सकिन्छ भन्ने कम्युनिष्टको जड सूत्रीय बाटो रोज्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले मैले भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक चरित्र फरक हुन् । अहिलेको सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको हो तर अहिले सरकारले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको छैन । दम्भको श्रीपेच लगाएको छ । सरकारको चरित्रको यहाँले विश्लेषण गरिरहँदा आफ्नै पार्टी एक ठाउँमा उभिएको देखिँदैन, विरोधका कार्यक्रम, भेला पनि फरक-फरक भइरहेका छन् नि ! यसले त सरकारलाई झनै सजिलो बनाएकोजस्तो लाग्दैन ? अब यो हाम्रा कारणले सरकारलाई सजिलो हुने र सरकारका व्यवहारका कारणले हामीलाई सजिलो हुने रैछ । अन्तर्सम्बन्धित हुने रहेछ । अहिले अधिनायकवाद नै नभनिहालौँ तर अधिनायकवाद उन्मुख भन्छ नि ! समाजवाद उन्मुख नेपालको संविधान भनेजस्तै अधिनायकवाद उन्मुख नेपालको सरकार छ । अहिले सरकारको अभिव्यक्ति, निर्णय प्रक्रिया, जवाफ दिँदै गर्दाको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति, उपकुलपतिमाथिको दुर्व्यवहार, सञ्चार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप यी समग्र विषयसँगै चिकित्सा शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा सरकारको जुन प्रकारको प्रस्तुति रहेको छ, यो समग्र प्रस्तुतिको प्याकेज चाहिँ सरकार अधिनायकवादउन्मुख हुँदै छ भन्ने नै हो । त्यसको सन्दर्भमा सडकमा पनि र सदनमा पनि प्रभावकारी भूमिका बढाउनतर्फ पार्टी लागेको छ । यसबीचमा पार्टीको सभापति, वरिष्ठ नेतालगायत पार्टीमा तपाईँले भनेजस्तो यो पक्ष ऊ पक्ष सबै नेतृत्व पंक्तिका १७/१८ जनाको दुई पटक छलफल हामीले गरिसकेका छौँ । पार्टी प्रवक्ताको नाताले म पनि सामेल भएको छु । छलफलको निष्कर्ष के रह्यो त ? छलफलमा दुईटा कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, पहिलो चाहिँ यो सरकारको रवैयाकाविरुद्ध सडकमा पनि र सदनमा पनि पार्टीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने । दोस्रो कुरो पार्टीको आन्तरिक जीवनको सन्दर्भमा जेजस्ता समस्याहरु छन्, तिनलाई आपसी सद्भावपूर्ण छलफलबाट एकताबद्ध निष्कर्षका साथ समाधान गर्ने भन्ने नै हो । त्यसकारण पार्टीभित्र त्यहाँ भेला भयो, उहाँ छलफल भयो भन्ने कुराले एकदमै विमति भयो भन्ने होइन । यो कुरो पनि चल्दै गर्छ र विवादहरु पनि चल्दै गर्छन्, विवादहरुको बीचबाटै पार्टीको जीवन चल्ने हो । भिन्न-भिन्न विचारबाटै अभिन्न बन्ने हो । त्यसकारण नेपाली कांग्रेस पार्टी अहिले मूल मुद्दामा एक भएको छ र एक भएर अगाडि बढ्छ । तपाईंले कांग्रेसभित्र गम्भीर खालको विवाद छैन भन्न खोज्नुभएको हो ? विल्कुलै होइन विवाद नै छैन पनि म भन्दिनँ । यत्रो इतिहास बोकेको पार्टी, विचार बोकेको पार्टी र सकेसम्म सबैको विचारलाई सुन्नु र बुझ्नुपर्छ अनि सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीमा विवाद हुन्छ । कोही बेला एकता हुन्छ । विवाद हुँदै गर्दा एकता नहोला भन्ने हुन्न । एकता हुँदै गर्दा, एकतापूर्वक नेताहरुले जानुपर्छ भनेर संकल्प गरिरहेको बेला अबका दिनमा विवाद नहोला भन्ने पनि हुन्न । राजनीतिक दलमा फरक–फरक दृष्टिकोण हुन्छ । फरक–फरक दृष्टिकोण फरक–फरक विचार भए पनि लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र राष्ट्रिय हितको विषयमा एउटै मालामा गाँसिएर जानुपर्छ भन्ने चेत कांग्रेसका देशै भरिका हामी नेता कार्यकर्तामा छ । देशभरिको भावना पनि त्यही छ । चुनावको परिणाम आएपछि यहाँले नेपाली कांग्रेस अस्पताल पुगेको छ, अब पार्टीको डायग्नोसिस गर्नुपर्छ, अनि सामान्य उपचार गरेर हुन्छ या शल्यक्रिया गर्नुपर्छ त्यो गरिन्छ, भन्नुभएको थियो । अहिले पार्टीलाई जीवन्त बनाउन के गर्नुपर्नै रहेछ त ? नेपाली कांग्रेस पार्टीको पराजयपछि मैले त्यतिखेर नेपाली कांग्रेस पार्टी अस्पतालमा छ भन्ने शब्दावली किन भनेको थिएँ भने त्यतिखेर धेरैले कांग्रेस सकियो, यसको सन्दर्भ नै छैन, अर्थै छैन, यो मर्यो, घाटैमा पुग्योजस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस्तो अभिव्यक्ति आइरहँदा मैले भनेको थिएँ, -घाटबाट एउटा मात्र बाटो हुन्छ, त्यो भनेको मोक्ष प्राप्ती होस् या नहोस्, खरानी हुनु । तर, अस्पतालबाट दुईटा बाटो हुन्छ । एउटा बाटो रुपान्तरण भयो भने नयाँ जीवन शुरु हुन्छ, रुपान्तरण भएन भने फेरि घाटतिरको बाटो हुन्छ । त्यसकारण नेपाली कांग्रेस पार्टीले रुपान्तरणको बाटोमा हिँड्दा अस्पतालमा छ, भनेको हो । व्यक्तिको जीवनमा त विभिन्न समस्या आउँछन् भने राजनीतिक दलको जीवनमा पनि विभिन्न समस्या नआउन कुरै हुँदैन । ७० वर्ष पुग्दै गर्दा कांग्रेसको जीवनमा पनि यो प्रकारका समस्याहरु आएका छन् । त्यसकारण राम्रो डायग्नोसिस गरेर जाने क्रममा जिल्ला सभापतिहरुको भेला सम्पन्न भइसकेको छ । अब महासमितिको बैठक हुँदै छ, कांग्रेस एक भएर अगाडि बढ्छ ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकारमा हुँदा जुन अध्यादेश जारी गरेको थियो, त्यो अध्यादेश हुबहू ल्याउनुपर्यो । हामीले कमा, फुलस्टप नै चेन्ज गर्नुहुँदैन भनेका छैनौँ । त्यसको स्पिरिटको जगमा, माथेमा कार्यदलको स्पिरिटको जगमा, डा.केसीको अनशन र आग्रहको जगमा साथै आम नेपाली जनताको भावनाको जगमा सरकार प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
तपाईंहरु सरकारमा हुँदा जारी गरेको अध्यादेशको कुरामा तपाईंहरुले संसद अवरुद्ध गर्नुभयो, सरकारले सुनेन । हालैमात्र फेरि आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ, यसलाई सुन्ला ? नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकारमा हुँदा जुन अध्यादेश जारी गरेको थियो, त्यो अध्यादेश हुबहू ल्याउनुपर्यो । हामीले कमा, फुलस्टप नै चेन्ज गर्नुहुँदैन भनेका छैनौँ । त्यसको स्पिरिटको जगमा, माथेमा कार्यदलको स्पिरिटको जगमा, डा.केसीको अनशन र आग्रहको जगमा साथै आम नेपाली जनताको भावनाको जगमा सरकार प्रस्तुत हुनुपर्छ । सरकार त्यसरी प्रस्तुत हुँदैन भने हामीले सदनमा र सडकमा आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो भूमिका निर्वाह गरेर देखाइदिन्छौँ । तपाईंहरुले डा. केसीको मागलाई प्रमुखताका साथ अघि सारेर कमजोर हाँगामा टेक्नुभयो भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ नि ! आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । ‘मरे मर’ भन्नु भनेको अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र निरंकुश प्रवृत्ति हो । डा. केसीले अघि सारेका माग यसअघि सरकारले सम्बोधन गर्छु भनेर कबुल गरेकै विषय हुन् । माथेमा प्रतिवेदन लागू हुनुपर्छ भन्ने हो । सम्झौता कार्यान्वयन गर भनेर हामीले सरकारलाई भनेका हौँ । फेरि केसीको जीवन रक्षाका लागि हामीले चालेको कदमलाई कसैले कमजोर हाँगामा टेकेको भनेर बुझ्छ भने ऊ गलत छ । हाम्रो माग यत्तिमात्रै होइन । सरकारका केही अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक निर्णयविरुद्ध पनि हामी आन्दोलित भएका हौँ । आन्दोलनबाट कस्तो उपलब्धिको अपेक्षा गर्नुभएको छ ? हामी संसदमा प्रतिपक्ष हौँ । प्रतिपक्षको काम सरकारलाई जनताप्रति बैमान हुन नदिने हो । देश र जनताका मुद्दामा कतै चुक्ने र चुकाउने काम हुन्छ भने हामी त्यसविरुद्ध उभिन्छौँ । अहिले हाम्रो आन्दोलन पनि देश र जनताको पक्षमा नै हो । सरकारलाई सही ट्रयाकमा ल्याएरै छाड्छौँ । अहिले धेरैलाई लाग्न सक्छ, कांग्रेसले केही बिजनेस पायो । तर, हाम्रो आन्दोलन सफल भएपछि कालान्तरमा महशुस गर्नेछन्, कांग्रेस थियो र राम्रो भयो ।